Maqaalka Sam Melnick ee Martech Zone |
Maqaallada by Sam Melnick
Miisaaniyadaha CMO way sii yaraanayaan, maadaama suuqleyda ay la halgamayaan bisayl maaliyadeed, sida uu sheegay Gartner. Iyada oo si aad ah loogu fiirsanayo maalgashigooda sidii hore, CMOs waa inay fahmaan waxa shaqeynaya, waxa aan ahayn, iyo halka ay ku bixinayaan doolashooda soo socota si ay u sii wadaan inay hagaajiyaan saameynta ay ku leeyihiin ganacsiga. Gali Maamulka Waxqabadka Suuqgeynta (MPM). Waa maxay Maareynta Waxqabadka Suuqgeyntu? MPM waa isku darka geedi socodka, teknolojiyada, iyo talaabooyinka ay adeegsadaan ururada suuqgeynta si loogu qorsheeyo howlaha suuq geynta,